"Aleo ihany..." -
AccueilTresaka« Aleo ihany… »
« Aleo ihany… »
13/03/2018 admintriatra Tresaka 0
Ny resaka malagasy mitsoa-ponenana any Koweït sy ny tany Arabo sasany no indro entina amintsika indray eto. Mety samy manam-paniriana hiala eto Madagasikara amin’ity tabataba sy korontana ary tebiteby lava ity daholo angamba raha ny marina saingy…
Voatery miteny izany manoloana ireto teratany malagasy mbola mikiry mandeha any Liban, Koweït sy ny sisa ireto. Efa fantatra izao fa afobe no miandry any, ary efa betsaka ireo tranga notaterin’ny hainoamanjery maneho fampijaliana sy herisetra amin’ireo mpiasa tany.
Indraindray tokoa rehefa mahita ny filaminan-tsainan’ireo Malagasy nanorim-ponenana any ivelany any, dia toa alaim-panahy hangoron’entana ihany koa, indrindra rehefa mananontanona izay ny korontana sy ny savorovoro ateraky ny adilahy politika. Tsy ny Malagasy rehetra lasa any ivelany koa anefa no manana fiainana milamina an! Maromaro mihitsy ireo mifika taolana any an-tanin’olona any, saingy mahay manafina fahoriana rehefa mba sendra mandalo eto Madagasikara.
Marina tokoa ary tsy azo lavina fa mbola ao anaty fahasahiranana sy fahantrana tanteraka isika. Iza anefa no afaka hanarina ity tanindrazana iombonana ity raha tapa-kevitra handao an’ity Madagasikara ity daholo isika rehetra? Tsy azo omen-tsiny koa anefa ireo nisafidy ny nandeha satria ny ho avin’ny taranany mihitsy no mety tsy azo antoka intsony vokatry ny tsy fisian’ny fitoniana eto amintsika. Asa raha mba mahatsapa izany ireo mpanao politika tia tena tsy mahalala afa-tsy fahefana sy seza? Asa raha mba azon’izy ireo an-tsaina fa lasa afobe ny fiainan’ny vahoaka noho ny fitiavan-tenan’izy ireo?
Toa mampatsiahy ny tenin’ilay dokotera malagasy nonina sy nipetraka tany Alemana ihany anefa izao zava-misy iainantsika izao nanao hoe: “aleo ihany mijanona any Madagasikara toa izay hitonantonana aty an-dafy aty. Tsy misy afa-tsy “béton” no mitsena anao raha sanatria…”. Izay ilay antsoin’ny tanora hoe « midona amin’ny rindrina ». Mbola misy tany azo ambolena eto amintsika, ary tokony hilofo amin’izany rahateo koa, satria io fambolena sy fiompiana io no anisan’ny lalana hivoahantsika amin’izao fahantrana izao.
Taorian’i Sambava, Nosy-Be ary Ambatolampy dia tsy nohadinoin’ny Filoha Hery Rajaonarimampianina ny nitsidika ny distrikan’i Maroantsetra. Araka izany, vahoaka marobe tao anatin’ny hafaliana no nitsena ny Filoham-pirenena omaly, eny fa na dia nikija aza ny ...Tohiny